Militariga Soomaaliya oo loo tababaray habka loola dagaalo Askareynta Caruurta Xiliyada dagaalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Militariga Soomaaliya oo loo tababaray habka loola dagaalo Askareynta Caruurta Xiliyada dagaalka
Militariga Soomaaliya oo loo tababaray habka loola dagaalo Askareynta Caruurta Xiliyada dagaalka
Muqdisho (SONNA) Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa soo gaba gabeeyay Tababar la siinayay 60 askari oo ka tirsan ciidmada amniga dalka, Iyadoo lagu baranayay ka hortaga Askareynta Caruurta xiliyada dagaalka.
Tababarkan oo socday labo Todobaad ayaa waxaa ka soo qeyb galay Saraakiil ka socday Ciidamada Militariga iyo Booliska, Ururada aan dowliga ahayn iyo xubno ka socday Maamul goboleedyada dalka, waxaana tagaeerayay dowlada Ingiriiska iyo Ururka lagu magacaabo Romeo Dallaire oo ka hortaga askareynta caruurta ayagoo usoo marinayo Dalhousie University ee Canada.
“Waa inaan ka badbaadinaa caruurtan in loo tababaro fikiradaha Guracan ee Argagaxisada iyo in ay geystaan falal dambiyeedyo ay u geysanayaan dadkooda,Dalkooda iyo Dariskooda” Sidaas waxaa yiri wakiilka AMISOM ee Somaaliya Francisco Caetano Madeira asgaoo ka soo qayb galay xiritaankii tababarka.
Safiirka ayaa sidoo kale sheegay in askareynta caruurta ay aad ugu badan tahay Soomaaliya, wuxuuna sheegay in baahi weyn loo qabo in la helo tirada rasmiga ah ee caruuta ka dagaalamayso dalka.
Tababarkaan oo xooga lagu saarayay ogaanshaha ama soo saarista caruurta askarta ah iyo sidii looga hortagi lahaa ayaa waxay isku raaceen dhamaan madaxdii ka soo qeyb gashay in ay muhiim tahay caruurtaasi in ay helaan Wacyi galin iyo in Noloshooda dib loo habeeyo.
Previous article133 qof Soomaali ah oo Dalka dib loogu soo celiyay
Next articleKulan lagu soo Bandhigayay Dhibaatooyinka ka jira Baddaha Soomaaliya oo lagu qabtay Muqdisho